သံမဏိ fireproof ရှပ်တာဘိုင်လျင်မြန်စွာတံခါးကို China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:သံမဏိမြန်လှုပ်ရှားမှုတံခါး,လေတိုက်ပြင်ပတံခါး,roller Shutter လုံခြုံရေးတံခါး
Home > ထုတ်ကုန်များ > roller Shutter တံခါး > သံမဏိကြိတ်စက် Shutter တံခါး > သံမဏိ fireproof ရှပ်တာဘိုင်လျင်မြန်စွာတံခါးကို
သံမဏိ fireproof ရှပ်တာတံခါးကို
သံမဏိမီးရှပ်တာတံခါးများလူနေအိမ်အဆောက်အဦးများ, အများပြည်သူအဆောက်အဦးများနှင့်စက်မှုအဆောက်အဦများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအများအားဖြင့်မြေအောက်ကားဂိုဒေါင်မီးခွဲခြာ, မီးအခန်းနှင့် firewalls လိုအပ်သည်ဘယ်မှာကြီးမားသောကုန်တိုက်ကြီးတွေအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ မီးရှပ်တာတံခါးများမီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, လေတိုက်ခြင်းနှင့်မီးခိုးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Anti-ခိုးယူ၏ function ကိုမီးခိုးနှင့်အပူချိန်နှိုးဆော်သံပစ္စည်းကိရိယာများ, ရေကုလားကာမှုန်ရေမွှားသည့်စနစ်နှင့်အခြားထောက်ပံ့အဆောက်အဦတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေနိုင်ပါသည်။ ဘယ်အချိန်မှာမီးတွေ့ဆုံတံခါးကိုလဲအနီးကပ်ဆက်လက်ပြီးနောက်အလိုအလျောက်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့ပြည်တွင်းရေး်ထမ်းများအတွက်) မီတာ, start ကရြောကျဖို့ရှပ်တာတံခါးမခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့် (မြေပြင်ကနေ 1.5) 1 ~ 10 မိနစ်ကိုရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်, တံခါးကိုလိုအပ်သောလျှင်, ထို့နောက်ပိတ်ဖို့ရန်စက္ကန့်အနည်းငယ်, စာနယ်ဇင်းနှင့်အရေးတကြီး Stop button သို့အပြီးနှောင့်နှေးရှိလိမ့်မည်, ကအနီးကပ်မဟုတ်ကြလိမ့်မည်ကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆက်လက်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်, အတွင်းအပြင်နှင့်ပြင်ပရှိအရေးပေါ်ဓာတ်လှေကားခလုတ်ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
သငျသညျရှေးခယျြဖို့အတှကျအစွန်ခံ fireproof ရှပ်တာတံခါးများအချို့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
လွှဲတံခါးကိုနှင့်အတူ 3) သံမဏိမီးရှပ်တာတံခါးကို
4) Lateral သံမဏိမီးရှပ်တာတံခါးကို
သတ္တု (လူမီနီယမ်အလွိုင်း) မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး
ကုန်ပစ္စည်း: သတ္တု Rapid Rolling တံခါး (High Speed တံခါး)
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: HongFa (HF) သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြအဖြစ်
ပစ္စည်း: လူမီနီယမ်အလွိုင်း T0.7MM
PU အမြှုပ်, လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှုအတွင်းပိုင်း
Panel ကိုအထူ 43MM
မော်တော်: ချုပ် / SEJ
lift စတိုင်: ဒေါင်လိုက်ဓာတ်လှေကား, 90 °စံဓာတ်လှေကား, တာဘိုအမျိုးအစား, ဘဲဥပုံအမျိုးအစား
parameter: 1) ဖွင့်ပွဲမြန်နှုန်း: 1.2 ~ 1.5 / s ကို;
ပိတ်ပွဲမြန်နှုန်း: 0.6m / s နဲ့, ချိန်ကိုက်
2) လေတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ: 32m / s နဲ့
3) အရောငျ: မီးခိုးရောင်, လူမီနီယံမူရင်းအရောင်နီ, ပုလဲအဖြူရောင်
4) အရေးပေါ် switch ကို; Photocell
5) Servo motor ကို 380v / 14A / 50Hz
6) လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်: K≤1.5W / (M2K)
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစက်ပစ္စည်း: 1. Photocell အာရုံခံ (ကိုရီးယား Autonics)
2. အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအစွန်းအောက်ခြေ (လိပ်ပြာဖိအားလှိုင်းအာရုံခံကိရိယာ
Delivery အချိန်: 10 -15 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်း
ထုပ်ပိုး: အထပ်သားအမှုသို့မဟုတ် Cardboard, ပင်လယ်ကုန်စည်သို့မဟုတ်လေကြောင်းကုန်စည်များအတွက်သင့်လျော်သော။
သံမဏိမြန်လှုပ်ရှားမှုတံခါး လေတိုက်ပြင်ပတံခါး roller Shutter လုံခြုံရေးတံခါး သတ္တုမြန်လှုပ်ရှားမှုတံခါး မြန်မြန်လှုပ်ရှားမှုတံခါး လျင်မြန်စွာလှုပ်ရှားမှု Hangar တံခါး လျင်မြန်စွာလှုပ်ရှားမှု stacking တံခါး ဒေါင်လိုက် overhead မြန်လှုပ်ရှားမှုတံခါး